Windows dị mfe, mana GNU / Linux dịkwa oke | Site na Linux
Windows dị mfe, mana GNU / Linux dịkwa oke
A bụ m na-agụ ikwu site n’aka onye na - agụ akwụkwọ aha ya bụ “Onye njem ahụ” nke o tinyere oge ole na ole gara aga, m na-aguputa:
Enwere ike ịkọcha Windows maka ọtụtụ ihe, mana ọ dị mfe, dị mfe iji site na mbido, n'agbanyeghị agbanyeghị ihe ọmụma mmadụ nwere ma ọ bụ enweghị ya.
Ọ bụghị nzube m iwepu ikike inwe echiche ahụ, mana anaghị m akọrọ ya ma kọwaa ihe kpatara ya.
Udo nke a Usoro njikwa ha dabere na akụkụ nke omume onye ọrụ iji soro ya rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị, onye ntorobịa ma ọ bụ okenye nke na-emetụbeghị kọmputa, nọdụ ya n'ihu nke ọ bụla Nkesa de GNU / Linux ma ọ bụ ihe ọ bụla version nke Windows, ị gaghị ama ihe ị ga-eme n'agbanyeghị agbanyeghị mbọ ị na-agba.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ, onye na-eto eto ma ọ bụ okenye, anọgide na-anọdụ ala n'ihu otu kọmputa ahụ, ọ na-ahụ ndị na-akụziri ya ihe ndị bụ isi dịka iji ihe nchọgharị faịlụ, ụlọ ọrụ ọfịs, ọ mụtara ịntanetị ma dozie obi abụọ ya, nke nta nke nta Usoro njikwa na ị na-eji amata ihe, dị mfe ma nwekwuo nghọta.
Ka anyị kwuo isiokwu nke ihe atụ anyị bidoro Windows. Ọnwa ise ka e mesịrị, mgbe ọ mụsịrị ọrụ na ya Windows Explorer, internet Explorer na ngwa ndị ọzọ etinyere na desktọọpụ nke ahụ Usoro njikwa, ọ ga-adị nnọọ iju ma ọ bụrụ na maka oge ị gbanwere kọmputa ma tinye Ubuntu, Fedora, Debian ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nkesa.
Ihu ọma ọ nwere ike igosi gị ebe menu dị KDE dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ onye ọrụ n'onwe ya nwere ike ịghọta myirịta na Windows Vista o Windows 7, ma mgbe m meghere dolphin, dika m matara (ma ọ bụ gosi) na o nwere ike ime otu ihe "ma ọ bụ karịa" karịa na Explorer, ọ ga-eche iru ala, iju, ọbụlagodi na mbụ. Otu ihe ahụ na-emekwa n'ụzọ dị iche.
Onweghi onye nwere ike ịgwa m na nwoke a na-ejitụbeghị kọmputa, na usoro ịwụnye Windows ị ga-ama otu esi ekewaa draịvụ ike. Mana anyị agabeghị okwu esemokwu dị otú ahụ, ọ na-esiri ezigbo enyi anyị ike na-enweghị ahụmahụ ịmata etu esi ahazi ya Mmasị Internet Explorer.
Ọ bụ ya mere na anaghị m ekerịta njirisi ahụ Windows ọ dị mfe na kensinammuo na GNU / Linux mba. Ha abụọ nwere otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ Nkwado na Enyemaka, Oha obodo, Nzukọ, IRC ọwa, nke ahụ bụ, ebe a na-azụ, na-ezi ihe ma na-amụ ihe.
Otú ọ dị, e nwere obere ihe dị iche. M na-ekwu ya dị ka onye ọrụ na m si Windows n'ihi na ihe karịrị 5 afọ, na dị ka onye ọrụ na m si GNU / Linux n'ihi na ihe karịrị 4. Ozugbo ị na-amụta na-arụ ọrụ na GNU / Linux, na ị mụtara na ngwọta nke nsogbu gị dị na Usoro ndekọ ma ọ bụ gbanwee faịlụ nhazi; ozugbo ị mụtara ịghọta na site n'ịgụ obere ị nwere ike idozi ọtụtụ obi abụọ gị, mgbe ahụ ọ na-esiri nnọọ ike ịrụ ọrụ na ihe dị mfe dịka ọ nwere ike ịbụ (ma ọ bụ na ha asị na ọ bụ) Microsoft Windows.
Mgbe m na-anọdụ ala n'ihu Windows XP, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, enwere m mmetụta agbụ. Ọ naghị enyere m aka na mgbe njehie gasịrị, ntakịrị windo na-apụta na-asị:
Nyefee njehie 0x00120YI00123 na Nkwado Microsoft
N'ihi na nke ahụ anaghị edozi nsogbu m ozugbo. Maka na nke ahụ anaghị agwa m ihe bụ ezigbo nsogbu m. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere m ji eji ya (na m ga-eji) GNU / Linux, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ, amaara m ebe m ga-ele anya ịchọta ihe ngwọta maka njehie, nsogbu, ọdịda, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-apụta.
Agam laghachi na mbu, kwuo ya Windows dị mfe ọ bụ mmeghe. Ikwu ya GNU / Linux siri ike ọ bụ mmeghe. A na-enye nsogbu ahụ dị ka ikike onye ọ bụla nwere ike idozi ihe ụfọdụ n'ọnọdụ ụfọdụ. Ọ bụ n'ikike nke onye ọ bụla ma a bịa n'ịmụta na imezi onwe ya. Ọ bụ n'amaghị ihe anyị na-eme na otu akụkụ ọ bụla si arụ ọrụ. Na nkenke, ihe isi ike dị na onwe anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Windows dị mfe, mana GNU / Linux dịkwa oke
Ihe 42 kwuru, hapụ nke gị
Ejighi m MS WOS ruo afọ abụọ ugbu a ... otu a ka ndị Alcoholics Anonymous si enye anyị medal.
Mgbe ugbu a ha gwara m ka m rụnyeghachi ma ọ bụ mezie kọmputa ahụ, m na-etinye Ubuntu - ọ kachasị mfe ka ha ghọta -
Wụnye freeciv na windo dịka ọmụmaatụ?
1.- Chọọ maka freeciv na google
3.- nye exe
Usoro ihe ngosi:
2.- chọọ freeciv
3.- pịa tinye
"zọ "siri ike"
sudo apt-nweta wụnye freeciv
na-amuta "sudo apt-get install" - ma eleghị anya, mmadụ ga-ede akwukwọ iji "wụnye ngwugwu" ebe ị ga - etinye aha ahụ.
Banyere ịwụnye usoro ihe niile yana ngwa na ndị na-achịkwa
MS WOS: usoro dị mfe
1.- Gaa itoolu họrọ mmemme na ịwụnye
2.- gaa na weebụsaịtị ọ bụla, budata ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ ma wụnye
3.- ịdenye aha na otu njikwa ga-agwa gị nke mmelite - B NOTGHUT AKWOMKWỌ - nke ndị ọkwọ ụgbọala
Wụnye na voila, ya na ndị ọkwọ ụgbọala na mmemme ị ga-ebudata site na itoolu.
2.- Ọ bụrụ na ị chọrọ iji proprietary controllers, abụọ clicks
3. - A na-emelite ya naanị, ọ na-ajụ gị ma jụọ maka paswọọdụ gị
Maka onye ọ bụla ọ dị mfe iji Ubuntu karịa MS WOS, enyewo m klaasị etu esi eji MS WOS, na njedebe, "dị ka onyinye" Aga m akuziri gị Linux ihe ha kwuru siri ike ...
1.- chọọ wubi
2.- gbaa ya
3.- soro ntuziaka
5.- Jiri Libreoffice mee ihe omume MSO ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, jụọ
6.- M na-a toụ sịga, anaghị enwe Ajụjụ
M na-aga ị smokeụ sịga
Ọ́ bụrụkwanụ na ị kwụsịla ị smokingụ sịga?
Enweghị m ike inyere ya aka
Y’oburu n’ichefughi nmehie nsupe (dika m), ikwesiri ighota obere nkowa nke eji okwu mkpasu iwe kwue, hehe heh.
M na-eme ihe atụ, Windows bụ ụgbọ ala nwere igbe akpaka na Linux bụ nke nwere igbe aka, nke mbụ echere m na ọ na-achịkwa m na nke abụọ na m na-achịkwa ya.
Ezigbo ihe atụ
Otu ihe ahụ na-eme m, ọ bụrụ na m na-eji kọmputa Windows ugbu a ọ na-adị m ka ọ bụ ihe iju anya, dị ka onye na-abaghị uru nke na-amaghị ihe ọ ga-eme ya.
Nyefee maka uL
Echere m na "Onye njem ahụ" ezighi ezi.
Ka anyị leba anya n’okwu na-esonụ:
Wụnye OS na desktọọpụ nke onwe gị wuru ma ọ bụ zụta laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ.
Ka anyị hụ usoro iji wụnye Windows na usoro iji wụnye nkesa kachasị nke GNU / Linux.
Echichi Windows (Ikpe a na-ekpuchi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ, ma ọ bụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ)
- N'oge ụfọdụ nke usoro nwụnye, ị ga-agwa ha na anyị ga-arụ ọrụ ngwaahịa ahụ ma emechaa (n'ihi na ezi uche dị na anyị enweghị ikikere, m kwughachiri ihe niile n'ihi na enwere ndị na-azụta ikikere: P)
- Ozugbo e mechara nwụnye, ị ga-achọ ndị ọkwọ ụgbọ ala n'ihi na Windows anaghị amata ngwaike niile ma ọ bụrụ na ọ mere, ndị ọkwọ ụgbọ ala Windows na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ, ọkachasị ndị ọkwọ vidiyo.
- Mgbe ahụ ị ga-ahụ Loader na-arụ ọrụ, dị ka "Windows Loader site Daz".
- Mere nke a naanị! anyị nwere ike imelite usoro.
- Ikwesiri ịchọta antivirus ma kpochapụ ya ma ọ bụ jiri antivirus free.
- Otu maka Spyware
- Ma maka mgbochi rootkit (:
- Chọta, wụnye ma gbawaa ọfịs na ọrụ. Maka na ha amaghi na enwere uzo ozo ndi nweere onwe ha na odi nma.
- have nwere iji wụnye codecs na-egwu egwu na vidiyo
- Wụnye ndị egwuregwu dị mkpa maka ihe ekwuru na isi okwu ma ọ bụ jiri Windows Media Player maka ihe niile.
- Wụnye mmemme izizi dịka Windows Live Messenger ma ọ bụ Yahoo, dabere n’ihe ị na-eji
- Wụnye ihe nchọgharị ma ọ bụrụ na ịchọghị Internet Explorer
- Wụnye compressors file / decompressors (WinRAR) ma mbanye anataghị ikike, enwerekwa ndị nweere onwe ha, mana ọ bụrụ na ịchọrọ iji algorithm nke "RAR Lab", ị ga-akwụ ụgwọ.
- Wụnye diski burner dị ka Nero yana nke ya mgbape ma ọ bụ jiri nnwere onwe nweere onwe ya na enwere ọtụtụ maka Windows mana ọtụtụ mmadụ na-ekwu, sị: "Achọrọ m ịgba ọkụ, kedu ebe Nero nọ?"
Na na anyị ga-ama arụnyere ọhụrụ anyị na Desktọpụ / Laptọọpụ nke bịara na-enweghị a isi na ọtọ Windows OS.
ka anyị lee okwu nke ọzọ
Wụnye GNU / Linux Plus User-Frienldy distro
- Anyị na-etinye diski ahụ
- Anyị pịa bọtịnụ ọzọ, na-esote, na-esote ... (ee, ọ bụ windo windo) ruo mgbe echichi arụchaala.
- wụnye ndị ọkwọ ụgbọala (site na ndepụta nke sistemụ ahụ gosipụtara), ọ bụrụ na ịnwe ngwaike nke kernel anaghị achọpụta.
- iji melite
- nwee obi ụtọ
Dịka ị pụrụ ịhụ, sọftụwia niile a ga-arụnyere na Windows na-abịa na arụnyere ndị ọrụ enyi na enyi.
Ewoo! Echefuru m ... Ọ bụrụ na ịchọrọ sọftụwia ọzọ enwere windo na-egosi gị nnukwu ndepụta nke ngwanrọ iji wụnye naanị site na ịhọrọ ya na ndepụta ahụ na ịpị bọtịnụ awụnyere, na-enweghị mgbawa ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Dịka m si hụ ya, Windows siri ike karịa.
Nke ahụ ga-abụ onyinye m.
Ekwenyere m na elav, ihe niile dabere na ihe anyị jiri, ọ were m 4 ma ọ bụ 5 awa iji wụnye Windows na batrị niile nke ngwanrọ ndị ọzọ a ga-arụnye, ọ bụghị na GNU / Linux.
Imeri esighi ike, ọ bụ naanị azụmaahịa.
Mgbe nwụnye ị kpọtụrụ aha Win,
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe? Opekempe 2 ruo 3 awa ọ bụla.
Ọ bụ ịchọ usoro ihe omume ahụ, budata ya, hụ na ọ na-arụ ọrụ, tinye igodo, ịgbawa.
Antivirus na etinye oge, n’acho igodo, wdg.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala na-etinye oge dị ukwuu, Ọ B IFR YOU na DON B DONGH THE IKPERE
Na Linux (Ubuntu) nwụnye na-ewe ọbụlagodi 20 ruo 30 min
Ọ bụrụ na ị na-achọ mmemme na otu Ubuntu Center ị ga-ahụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị.
Na Arch ọ bụ naanị ịhụ Wiki na voila, MFE.
Dị ka Win, Linux, Mac, Unix. Ọ nwere ike ịdị mfe.
Inghụ na mmeri bụ azụmahịa kachasị, ha na-akụzi ya n'ụlọ akwụkwọ ma tụfuo ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ha kuziri Linux, Mac, Unix. Ọ ga-abụ otu ihe ma ọ bụ dị mfe karịa Win.
Ọ dịghị OS dị mma karịa onye ọzọ.
Esemokwu ha dị mkpa na ngalaba ha.
Na Linux ị nwere ike ịkpọ Gears of War dị ka pacman.
You ma ihe os na-eji Xbox ??? You ma ihe OS na-eji PS3 ???
Omume ụlọ 😀
Nkeji 20? Nah nwoke, Ubuntu Natty wụnyere m na LITERALLY 7 nkeji, ịtụnanya haha ​​😀
Nye Chineke otuto, diri anyị Linux…. Naanị m tinye LMDE na pc m na-arụ ọrụ, enwere m nzuzu, ọ bụ ezie na amaghị m ntakịrị ihe banyere nke a, ọ masịrị m etu pc m si agagharị.
O di nwute na enweghị m ike ịwụnye ya n'ụlọ m n'ihi na enweghị m ịntanetị ma ọ nwere ike bụrụ na ọ bụ amaghị nke m, mana linux na-adabere nke ukwuu na ịntanetị.
n'agbanyeghị na enwere m obi ụtọ, ugbu a, m ga-achọta ụzọ m ga-esi egwu naanị egwuregwu nke m ga-efufu oge m na akụkọ mgbe ochie….
Daalụ ụmụ okorobịa… karịsịa Gaara onye nyeere m aka ịza ajụjụ ya ..
hehe ... a na m ahapuru ụnụ ihe ngwọta iji wụnye LMDE n'ụlọ n'enweghị ịntanetị 😉
Obi uto inyere gi aka friend
Bịanụ, LoL na-agba ọsọ mgbe ị na-eme ya na Linux, Agbalịrịla m ya ma onye ọ bụla bụ otu. Mma nwere obere nkebi maka nke ahụ kpọmkwem. xD
Enweghị m ike ịbanye na nkebi data m, ngalaba a bụ NTFS na GParted ọ na-agwa m na ngalaba a Amaghi.
Nduzi ọ bụla?
Lelee ma ọ bụrụ na ịnwụnye nchịkọta: ntfs-3g y Ugochukwu
mgbe m rụnyere Ntfsprogs ya, ọ ga - ewepụ Ntfs-3g…. M etinyela Ntfs-3g ugbu a ihe m amaghị etu esi enweta ya….
NTFS, na ị na-ekwu ya niile, bụ naanị Windows
Ọ bụghị naanị n'eziokwu, enwere ike ịgụ ma gbanwee ya n'enweghị nsogbu na OS dị ka GNU / Linux
Ee n'ezie echefuru m banyere nnukwu Ubuntu nke nwere ike ịchọta ego na ọgwụ mgbochi ndị ahụ maka ịka nká na ịchọrọ JAJAJAJAJA
Ọfọn, onye ọ bụla emeela ihe ha kwuru ma abịa m ugbu a na nkwụsịtụ * iji tinye kaadị m na tebụl.
Ha nile enyela okwu nkasi obi, nke mara nma, ma na-akọwa nke ọma mana ha na-atụ uche nkọwa agwa. Achịkọta m ya n’ihe dị mfe dịka “paradigms” yana mediocre na emasculating agụmakwụkwọ kọmputa. Ka anyị chee ya ihu.Gịnị ka ha na-akuzi na kọmputa? "Nke a bụ CPU, nke a bụ ileba anya, nke a bụ ụlọ ọrụ MS na ejiri ya dị ka nke a (ọkara)" - prọfesọ na Linux- * ihu nke nlelị na-enweghị ngwụcha * Na klas!
Naanị ha anaghị akụzi ọkọlọtọ ihe ọ bụla, ha na-akụzi ma na-agbachi ụmụ akwụkwọ n'ime usoro ma meere ha ọhụhụ ọhụụ. Na njedebe, ọdịdị emere ma gosipụta bọtịnụ: tinye nwatakịrị nwoke dị afọ iri na anọ libreoffice (interface dị ka ụlọ ọrụ MS) ọ ga-apụ ntutu ya wee tie mkpu na gị bụ ụlọ ahụ. (kwere m, ahụmahụ nke m).
Ekwenyere m nke ọma, n'ihi na ọ naghị esiri ụmụaka ike ịmụ na mgbe a bịara n'ịgụ obere ihe, nwanne m nwoke dị afọ 9 maara LMDE nke ọma, yabụ nsogbu abụghị na GNU / Linux siri ike mmụta Ọ bụrụ na ọ bụghị, dị ka ị na-ekwu, nke a bụ ebe ha na-etinye onye ọ bụla nzuzu ịkụziri ha ka ha jiri usoro nke na-ejikọ, na-achịkwa ma na-arara gị nye.
Ọfọn, na 14 m jiri Linux mee ihe n'ụzọ zuru oke, mana enweghị iwu na-enweghị isi
Ahụmịhe ọrụ, site n'ihe dị ka afọ 4 gara aga:
Anọ m na-arụ ọrụ n'oge ahụ na ụlọ ọrụ na-akwaga na ngwanrọ n'efu iji chekwaa ụgwọ ikike.
N’ebe a, nwa agbọghọ na-amaghị etu o si eji kọmputa etinye Ubuntu, OpenOffice, Evolution, Firefox na onye na-egwu 5250 emulator na PC / PC.
Ọ mụtara iji OpenOffice na-ede ihe edetu na mpempe akwụkwọ, o zipụrụ ma nata e-mail na Evolution, ọ na-eji ozi ngwa ngwa na onye ahịa Jabber Spark, ọ na-eji Firefox maka ngwa intranet na ịnweta ịntanetị.
Otu ụbọchị, e goro onye njikwa na-eti mkpu na mbara igwe n'ihi na ọ chọghị itinye mbọ iji OpenOffice, n'agbanyeghị na ka anyị kwuo na nwoke a abụghị onye ọrụ kachasị elu nke ga-eji atụmatụ ndị na-adịghị na OpenOffice n'oge ahụ, yana choro iji MS Office.
Iji mee ihe ndị a kwuru - na n'ihi ụkpụrụ a na-achọ na mpaghara IT, atụmatụ ịkwaga na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ laghachiri, ọ bụ ezie na ọ bụghị 100%: ejiri windo ọzọ, zụrụ ikikere ndị ọzọ. ndị ọzọ gara n'ihu na-eji emeghe - na enweghị ụgwọ ọnwa na afọ ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ime ya-
Ihe na-adọrọ mmasị banyere akụkọ a bụ na maka nwa agbọghọ izizi mụtara Ubuntu, ọ bụụrụ ya ihe isi ike karịa ka ọ mụta Windows XP, agbanyeghị na ọ mechara mụta ya.
Ihe enwere ike ikwubi bụ na ọtụtụ n’ime ihe na-eme ka ihe siri ike Linux bụ na ndị ọrụ mụtara windo na mbụ.
-naghị ụgwọ ọnwa na afọ ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ime ya-
O yiri ka obere ndudue a bụ ihe nkịtị na blog. N'ebe ahụ ọ na-aga ọzọ, maka gị Rubén na onye ọ bụla: ngosipụta nke ịdị adị "enwere" dị mgbe niile, n'oge niile.
Enwere mmụba ụgwọ; enwere mmụba ụgwọ; enwere mmụba ụgwọ; a ga-enwe mmụba ụgwọ; a ga-enwe mmụba ụgwọ; enweela mmụba ụgwọ ọnwa; a ga-enwe mmụba ụgwọ; na e nwere ụgwọ ọnwa; na e nwere ụgwọ ọnwa; na e nweela ụgwọ ọnwa; na e nwere ụgwọ ọnwa; wdg.
Daalụ maka klas Carlos-Xfce, ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ anyị na-efunahụ njehie nke ụdị 😀
Nwere onye nwere ike inyere m aka na ntinye nke Wine na LMDE, achọgharịrị m mana enweghị m ike ịchọta ihe ga-enyere m aka….
Ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụla na-erughị
kedu ihe na - eme na mmanya adịghị n’ime ebe nchekwa DEBIAN, ebudatara m ya mana enweghị m ike iwunye ya
Gaa ebe inwere faịlụ ahụ
Ugbu a mee
Kama, enwere m ike ịhụ Windows dị ka sistemụ nwere mmachi, ma ọ bụ kama ọ ga - egbochi gị ka onye ọrụ. Na nke ahụ (na-enweghị mkpa ịbanye na arụmụka banyere ụlọ ọrụ, ọtụtụ mba IT, sọftụwia ndị ọzọ na ndị ọzọ) bụrịrị ihe gbara ọkpụrụkpụ iji mee ka ọ dị ka OS na-ezighi ezi, yabụ a ga-ahapụrịrị ya.
N'iji Linux, n'aka nke ọzọ, ahụmịhe onye ọrụ enweghị oke ụlọ a na-ahụ anya, enweghị oke nnwere onwe, enwere ihe ọhụụ ịmara na ị ga-ahụ ihe ị ga-eji tinker.
Ọ bụrụ na mmadụ achọpụta na GNU / Linux dị mgbagwoju anya, ha kwesịrị ịgbasawanye nlele ha karịa .exe.
Ọ dabere, enwere ndị ga - ekwu na ọ dịchaghị mfe maka okwu egwuregwu, mgbe nke ahụ bụ n'ihi ụlọ ọrụ abụghị nke gnu / linux.
Ọ bụkwa eziokwu, ndị mmepe egwuregwu tinyere obere mbọ .. Amaghị m ihe kpatara eziokwu a, enwere ike ree egwuregwu ahụ maka Windows dịka ọ dị maka Linux.
Maka ndị na-egwu egwuregwu na ndụ a, ọ bụ nnukwu nsogbu. Ruo mgbe m gbanwere Linux, akụkụ dị oke mkpa nke ndị otu m bụ egwuregwu, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ezigbo egwuregwu vidiyo emulators na Linux. Mana agbanyeghị, ngwa ngwa nwụrụ karịa iji mmanya.
Ọfọn, o doro anya na enweghị m ike ịchọta LMDE, enweghị m ụzọ m ga-esi hụ akụrụngwa m, enwebeghị m ike ịwụnye ụda ma ọ bụ ndị ọkwọ vidiyo ... ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, enwebeghị m ike ịhụ ngalaba NTFS m ....
Echere m na m ga-arapara n'ahụ fedora, ọ bụ ezie na m nwere mmasị na nke a distro….
Otu ajụjụ .. Mgbe ị na-agba ọsọ LiveCD, ihe niile ọ na-arụ ọrụ?
Anọwo m afọ 5 na Windows na 2 na Linux ... eziokwu bụ na m mụtara ọtụtụ sayensị kọmputa na Windows mana ọ bụ iji mee ka mmụba ahụ gaa Linux wee pụọ na xD enweghị isi ịsị na ezinụlọ m dum wụlitere mụ na m, n'ihi na abụ m onye na-ewere kọmputa isiokwu na ụlọ xD. Mụnne m nwoke ndị nọkwa na Linux afọ abụọ ahụ makarịrị Kubuntu karịa Windows ọ bụla, ha jụdịrị m ihe kpatara na kọmpụta ha kọmpụta nwere Windows ma ọ bụghị Kubuntu, otu esi "dị mfe" (m na-ekwu).
Ya mere na ịdị mfe nke otu OS ma ọ bụ ọzọ nyere site na ọchịchọ nke onye ọrụ na oge nọrọ. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụrụ na onye emetụbeghị kọmputa ga-ahụ GNU / Linux siri ike dị ka Windows. (Agbanyeghị na ekwesịrị m ikwenye na usoro mmụta mmụta abụghị otu).
Ka m gharazi igwu egwuregwu PC, Windows adịkwaghị mkpa maka m (M na-enwebu Dual buut), yana Linux m ga-aga n'ihu ruo na njedebe oge ọ gwụla ma ụfọdụ ike majeure na-amanye m ịme nzọụkwụ xD
Mgbe m gụsịrị nkwupụta niile, nke akụkọ akụkọ a masịrị m nke ukwuu, achọpụtara m ihe m chefuru echefu: ọ na - ewe iwe na ijikwa sistemụ na Windows. N’ezie, iji paswọọdụ na-emelite ihe niile bụ ihe okomoko, gbakwunyere na ikwesighi ịmalitegharị oge ọ bụla. Anọ m na XP: Amaghị m etu Windows 7 si arụ ọrụ (gụọ "asaa" ọ bụghị "asaa"). Ka o sina dị, anaghị m atụ uche ihe ọ bụla gbasara Windows. Ma nke ọma, egwuregwu ... Enwetụbeghị mgbe m na-egwu egwuregwu. Eji m XP ochie m soro SNES na Gameboy emulators gwuru; Ha na-agba ọsọ na Linux, yabụ ahapụghị m ihe ọ bụla.
N'ụlọ m, ezinụlọ m na-eji GNU / Linux. Nwanne m nwoke na nne m jiri Mint 11, ana m eji LinuxMint 10 mana ugbua ana m ebudata iri na abụọ na ya. Anyị nwere naanị otu atụrụ ojii na ezinụlọ ma ọ bụ Asus Laptop na W7 mana echegbula ọ ga-adaba n'oge na-adịghị anya.
Zaghachi na 0N3R
Hahahaha .. Ọ bụrụ na ọ chọghị ịda, zitere m ya na m ga-akwụ ya ụgwọ maka webata ekwensu n'ime hahaha
Ndewo, enweworị m ike ịchọpụta ihe bụ nsogbu nke nkebi ahụ, echefuru m na na windo m arụ ọrụ BitLocker ka m wee ghara ịrịgo ya, m banyere windo wee wepụ ya puff….
ugbu a achọrọ m enyemaka na ihe ga-enyere m aka ịhụ ngwaike nke pc m ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Iji lee ije na ime uname -a ọ gwara gị
Banyere ndị ọzọ m na-amaghị, ma ọ bụrụ na i nwere Intel ndịna-emeputa ị gaghị enwe nsogbu
See hụrụ, ọ bụ Windows mgbe niile na-ata ụta LOL !!!!
Ọ bụrụ na ị na-eji Gnome, gbalịa HardInfo 😉
Wbar-config: Ngwaọrụ iji hazie ma hazie Wbar
Jiri proxy na Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce na ihe yiri ya